I-China Diamond Concrete Floor Dry Use Resin polishing Pad for Floor Grinder Manufacture and Factory | Bontai
I-Diamond Concrete Floor Dry Sebenzisa Iphedi Yokupholisha I-resin ye-Floor Grinder
Lawa maphedi angu-3 inch torx polishing anomklamo oyingqayizivele, asebenzisa ifomula yethu yakamuva, eqinisekisa ukusebenza kwawo okuphelele ekupholiseni phansi ukhonkolo. Zinesikhathi eside sokuphila futhi zinolaka kunamaphedi e-resin avamile emakethe, futhi zingakhanyisa ngokushesha phansi ngesikhathi esifushane.
Usayizi: 3 intshi
Ukusetshenziswa: ukusetshenziswa okomile
Isicelo : yokupholisha ukhonkolo kanye nephansi le-terrazzo
Igama Lomkhiqizo I-Diamond Concrete Floor Dry Sebenzisa Iphedi Yokupholisha I-resin ye-Floor Grinder
Into No. RP312003035
Ukusetshenziswa Ukusetshenziswa okomile
Isicelo Ukupholisha ukhonkolo kanye ne-terrazzo floor
Umshini osetshenzisiwe Hamba ngemuva kwegrinder yaphansi
Isici 1. Isicwebezelisi esiphezulu siphela ngesikhathi esifushane kakhulu2. Ungalokothi umaka itshe futhi ushise indawo
3. Ukukhanya okukhanyayo okukhanyayo futhi akupheli
4. Unolaka olukhulu, susa ngokushesha imihuzuko eshiywe amaphedi ensimbi
Imigomo yokukhokha TT, Paypal, Western Union, Alibaba Trade Assurance Payment
Isikhathi sokuthumela Izinsuku ezingu-7-15 ngemva kokuthola inkokhelo (ngokuvumelana nenani le-oda)
Indlela yokuthumela Ngokubonisa, ngomoya, ngolwandle
Isitifiketi ISO9001:2000, SGS
Iphakheji Iphakethe lebhokisi lebhokisi lebhokisi elivamile
I-Bontai 3 inch Torx polishing Pads
Le pad yokupholisha i-torx eyi-intshi engu-3 iyimodeli entsha eklanywe unjiniyela wethu, ubukhulu bungu-10mm, amagrits 50#~3000# ayatholakala. Isetshenziselwa ukhonkolo owomile wokupholisha kanye ne-terrazzo floor futhi ifaneleka kangcono phansi ngokuqinile okuphakathi noma ngaphezulu.
Ama-Grits 50#~200# angamaphedi wokupholisha wesikhashana, angasusa ngokushesha imihuzuko eshiywe amaphedi edayimane ebhondi yensimbi. Abukhali kakhulu futhi anesikhathi eside sokuphila kunamaphedi amaningi ajwayelekile e-resin emakethe.
I-Grits 400#~3000# inganikeza ukugqama esitezini sakho ngesikhathi esifushane kakhulu, ingagcini nje ngokuba nokukhanya okuphezulu, kodwa futhi nokucaca okuphelele.
Singumkhiqizi wamathuluzi edayimane ochwepheshe, ogxile ekuthuthukiseni, ekukhiqizeni nasekuthengiseni zonke izinhlobo zamathuluzi edayimane. Sinezinhlobonhlobo zamathuluzi okugaya idayimane nawokupholisha ohlelo lokupholisha phansi, izicathulo zokugaya idayimane, amasondo enkomishi yokugaya idayimane, amaphedi okupholisha idayimane namathuluzi e-PCD njll.
● Isipiliyoni seminyaka engaphezu kuka-30
● Ithimba le-R&D elichwepheshile kanye nethimba labadayisi
● Isistimu yokulawula ikhwalithi eqinile
● I-ODM&OEM iyatholakala
I-Shanghai World of Concrete Show
I-Shanghai Bauma Fair
I-Big 5 Dubai Fair
I-Italy Marmomacc Stone Fair
I-Russia Stone Fair
1. Ingabe ungumkhiqizi noma umthengisi?
A: Impela singabakhiqizi, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu futhi uyihlole.
2. Ingabe uyawanikeza amasampuli amahhala?
IMP: Asinikezi amasampula wamahhala, udinga ukukhokhisa isampula kanye nempahla ngokwakho. Ngokwesipiliyoni seminyaka eminingi sikaBONTAI, sicabanga ukuthi uma abantu bethola amasampula ngokukhokha bazokwazisa abakutholayo. Futhi nakuba inani lesampula lincane kodwa izindleko zalo ziphakeme kunokukhiqizwa okuvamile. Kodwa nge-oda lesilingo, singanikeza izaphulelo ezithile.
3. Sinini isikhathi sakho sokulethwa?
IMP: Ngokuvamile ukukhiqiza kuthatha izinsuku ezingu-7-15 ngemva kokuthola inkokhelo, kuya ngenani le-oda lakho.
4. Ngingakukhokhela kanjani ukuthenga kwami?
5. Besingayazi kanjani ikhwalithi yamathuluzi akho edayimane?
A: Ungathenga amathuluzi ethu edayimane ngenani elincane ukuze uhlole ikhwalithi yethu kanye nenkonzo yethu ekuqaleni. Ngenani elincane, awudingi ukuthatha ingozi enkulu uma kwenzeka lingahlangabezani nezidingo zakho.
Okwedlule: 4" 50-3000 amaGrits Dry Diamond polishing Pads for granite Marble Stone kanye Nokhonkolo
Olandelayo: Amaphedi okupholisha isipontshi sedayimane angama-intshi angu-17 kakhonkolo, igranite, imabula
Idizayini entsha yebhondi ye-ceramic yebhondi yokupholisha idayimane ...
3″ ukusetshenziswa okumanzi kwe-diamond resin polishing pucks
3 amayintshi acijile amaphakhi edayimane omile okupholisha ama-co...
27inch Ukushiswa kwamaphedi okupholisha idayimane ukwenza...
3 amayintshi owomile sebenzisa amaphedi okupholisha ukhonkolo enzalo...
I-HTC diamond resin polishing pads kakhonkolo f...